ဗီဇအပြစ်၊ ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့် အပြစ်ကိုဖြေရှင်းခြင်း | Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin | Real Conversion
ဗီဇအပြစ်၊ ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့် အပြစ်ကိုဖြေရှင်းခြင်း
၂၀၁၃၊ မတ်လ ၂၄ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် သခင်ဘုရားနေ့၊ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး နံနက်ပိုင်း၌ဟောကြားသောဒေသနာတော်။
“ငါတို့ရှိသမျှတို့သည် သိုးကဲ့သို့ လမ်းလွဲလျှက်၊ ကိုယ့်လမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည် ဖြစ်၍၊ ထာ၀ရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏အပြစ်များကို“
ဒေါက်တာ ရစ်ချက်ဒ်လမ်းသည် တောင်ဘက်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ကွန်ဗင်းရှင်း၏ခရစ်ယာန် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှင့် သာသနာပြုဥက္ကဌ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာက ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်ယာန် ကျင့်ဝတ်ကို လျှစ်လျှူရှုထားပြီး အသက်ရှင်နေကြသည်ကို သိထားသူဖြစ်သည်။ ထိုဆရာ ပြောကြား ထားသည်မှာ၊
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်ကျင့်ဝတ်မဲ့စွာဖြင့်၊ အသက်ရှင်ကြသည်ဟူ၍ တိုင်းမ်ဂ္ဂ ဇင်း၌ ရေးသားသည်ကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် မကြာသေးခင်က အမှု တော်ဆောင်တစ်ဦးတွေ့ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့က ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ် များတို့သည် အပေါင်းလက္ခဏာသဖွယ် လက်ဝါးကားတိုင်၌ ချိတ်ဆွဲထားသော လုဂ္ဂိုလ် မြတ်ကိုသိဖို့လိုပါသည်။ ထိုလူငယ်တို့သည် ယေရှုကိုလည်းမသိခဲ့ကြ၊ လက်ဝါးကားတိုင် ကိုလည်းမသိခဲ့ကြပေ” ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည် (“The Man on the Plus Sign,” World Magazine, August I, 2009, page 24).
သခင်ယေရှုနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ ယေရှုမည်သူဖြစ်သည်၊ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သည်ကို အနည်းအကျဉ်းသာ လူတို့နားလည်ခဲ့ကြသည်။ များသောအားဖြင့် အသင်းတော်အများတို့တွင်၊ ခရစ်တော်နှင့်စပ်လျှဉ်း၍ အကျဉ်းသာဟောပြောကြ၏။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားများတို့၏နေရာ လက်ဝါးကားတိုင်တွင် အစားဝင် အသေခံသွားခဲ့သည်ဟူသော တရားဒေသနာတော်ကို တနင်္ဂနွေနေ့၌ သင်ကြားဖို့လိုပါသည်! ကားတိုင်ပေါ်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို ခံယူခဲ့ပြီး၊ ထိုအပြစ်၏ဒဏ်ကို ခံခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို ဆေးကြောသန့်ရှင်းစေဖို့ရန် အသွေးတော်ကို သွန်းလောင်းခဲ့ပါသည်။ စပါဂျန် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အချို့သောတရားဟောဆရာတို့၏ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ဒေသနာကို မဟောကြားခဲ့ပေ၊ သင်တို့အား သတိပေးလိုသည်မှာ၊ ဘယ်တော့မှ သွားပြီးနားမထောင်ပါနဲ့! ဘယ်တော့မှ သွားပြီးနားမထောင်ပါနဲ့! အသွေးတော်နှင့်ရောစပ်မှုမရှိသော သာသနာ၌ အသက်မရှိပါ၊ အသေသာသနာဟူသည် မည်သူ့အတွက်မှ အဓိပ္ပါယ်မရှိပေ” (C.H. Spurgeon, “Freedom Through Christ's Blood,” August 2, 1874). ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို ယေရှုထမ်းရွှက်ခဲ့သည်ဟူသော ကျမ်းစကား ဟေရှာယ ငါးဆယ်သုံး၌ မကြာခဏတွေ့ရပါသည်။
“ထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွှက်လေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၄)။
“ထိုသူသည် ငါတို့ကျူးလွန်ခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာထိုးခြင်း နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
“ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကို ဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
“သူခံရသော ဒဏ်ချက်ဖြင့်ငါတို့သည် အနာပျောက်လျှက်ရှိကြ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
“ထာ၀ရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့ပေါ်တင်တော်မူ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၆)။
“ငါတို့လူမျိုးအပြစ်ကြောင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို ခံလေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၈)။
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါ အလိုရှိ၍ နာစေတော်မူ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)
“သူတို့၏အပြစ်ကို ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွှက်လေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၁)။
“လူများတို့၏အပြစ်ကို ဆောင်၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၂)။
ဟေရှာယ ၅၃၌ ခရစ်တော်သည် ငါတို့အပြစ်များကို ယူတင်ဆောင်ရွှက်တော်မူ၏၊ ငါတို့၏ငြိမ် သက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်းသူ့အပေါ်သို့ရောက်၏ ဟူ၍ ထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြထားပါ သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရွှေကျမ်းချက်က အသစ်သောအတွေးအမြင်ကို ပေးနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ခရစ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကြောင့် ဝေဒနာခံရသနည်း၊ အပြစ်ကင်းစင်ပါလျှက် အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နေရာ၌ အစားဝင်အသေခံရပါနည်း ဟူသော ဆန်းသစ်သောအတွေးအမြင်များ ရှိနေဆဲ ပင်ဖြစ်သည်။
“ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့ လမ်းလွဲလျှက်၊ ကိုယ်လမ်းသို့ အသီးသီးလိုက်သွားကြသည် ဖြစ်၍ࢽထာ၀ရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်သို့တင်တော်မူ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၆)။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်အဓိက အချက်သုံးချက်ဖြင့် ခွဲခြားထားပါသည်။
၁။ ပထမ၊ လောကီလူသားအားလုံးတို့၌ အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခြင်း
“ငါတို့ရှိသမျှတို့သည် သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျှက်” (ဟေရှာယ ၅၃း၆)။
ဤတွင်၊ လောကီလူသား အားလုံးတို့၏အပြစ်ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ “ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲ လျှက်ရှိ” တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားသည်မှာ၊
“ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သို့နည်း။ ငါတို့သည် မြတ်သလော့ဟု မေးပြန်သော်၊ အလျှင်း မမြတ်။ အကြောင်းမူကား၊ ယုဒလူ၊ ဟေလသလူ၊ အပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်းကို အထက်ကပြောခဲ့ပြီ။ ကျမ်းစာလာသည်ကား ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိ၊ တစ်ယောက်မျှမရှိ၊ နားလည်သောသူမရှိ၊ ဘုရားသခင်ကို ရှာသောသူမရှိ” (ရောမ ၃း၉-၁၁)။
ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို ချိုးဖေါက်သောသိုး မဖြစ်ကြသည်။ လမ်းလွဲကြပြီ၊ ဘုရား သခင်ထာ၀ရဘုရားအထံတော်မှ ဝေးလွင့်ခဲ့ကြရပြီ။ တမန်တော် ရှင်ပေတရုမိန့်ကြား သည်မှာ၊
“သင်တို့သည် အထက်ကလမ်းလွဲ၍ ပျောက်သောသိုးဖြစ်ကြ၏” (၁ပေ ၂း၂၅)။
ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် လုံခြုံသောနေရာနှင့် သမ္မာတရားလမ်းမှ ပျောက်လွင့်ခဲ့ကြရပြီဟု အဓိ ပ္ပါယ်ရှိသည်။ (အထူးဖော်ပြထားသည်) ဤသည်ကား လောကီလူသားအားလုံး၏ အပြစ်ကို သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
“ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျှက်” (ဟေရှာယ ၅၃း၆)။
လူသားသည် အပြစ်ကို ကျူးလွန်မိသောအခါ၊ တိရိစ္ဆာန်ပမာ ပြုမူလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ အသိညဏ်ရှိသော တိရိစ္ဆာန်နှင့်ပင် နှိုင်းယှဉ်မထားတော့ပေ။ အဘယ်မည်သောသူကိုမျှ အသိရှိသော သိုးတစ်ကောင်နှင့်ပင် မနှိုင်းယှဉ်ထားတော့ပေ။
မိတ်ဆွေတို့က ဤမြို့ကြီးပြကြီး၌ အသက်ရှင်ကြရသောကြောင့် မိုက်မဲ့သောသိုးများအကြောင်း၊ သိကြမည်မထင်ပေ။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ရှိ လူသားတို့သည် မိုက်မဲ့သောသိုးများ အကြောင်းသိကြ၏။ ထိုအတွက်ကြောင့် သူတို့ကို ထိန်းကျောင်းကြရသည်။ ဂရုတစိုက်ပြုစုကြရသည်။
သိုးတို့၏တစ်ခုတည်းသော အပြုအမူသည် လမ်းလွဲဖို့ပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သိုးတို့သည် ခြံဝင်းထွက်ပေါက်တစ်ခုကို ရှာတွေ့ကြမည်ဆိုလျှင်၊ ထိုအပေါက်ဖြင့် တန်းစီထွက်ကြမည်သာဖြစ် သည်။ တကောင်တလေတောင်မှ နောက်ကိုပြန်လှည့်မည်ကို သတိရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့နောက် သိုးတို့သည် မိမိတို့လှုံခြုံရာနေရာမှ အဝေးသို့ ဝေးသထက် အဝေးကိုသွားကြမည်သာဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် လူသားတို့လည်းဖြစ်ကြ၏။ မကောင်းမှုပြုကြဖို့ လိမ်မာကြပြီး၊ ထိုမကောင်းမှုကို ပင် အကောင်းဟုထင်မှတ်ကြတော့၏။ ဂရိနတ်ဘုရား ဧဂါစ်ပမာ၊ သူသည် အပြစ်ကို ရှာဖွေလုပ် ဆောင်ဖို့ မျက်လုံးတရာရှိငြားလည်း၊ မျက်ကန်းဗါတိမဲပမာ ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေဖို့ မျက်စိကန်းနေ ဆဲဖြစ်၏! တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဤစကြာF၀ဌာ အပြစ်နှင့်စပ်လျှဉ်း၍ ဖော်ပြထားပါသည်။
“ထိုသူတို့သည် ဥာဏ်အလင်းကွယ်သည်ဖြစ်၍၊ စိတ်နှလုံးမိုက်မဲ့သောအားဖြင့် အလျှင်းမသိ သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏အသက်နှင့် ကွာရှင်းလျှက်ရှိကြ၏” (ဧဖက် ၄း၁၈)။
“ထိုအခါ သင်တို့သည် ခရစ်တော်ကိုမသိ၊ ဣသရေလအပေါင်းအသင်း၌မဝင်၊ ကတိတော် ပါသော ပဋိညာဉ် တရားတို့နှင့်မဆိုင်၊ မျော်လင့်ခြင်းမရှိ၊ လောက၌ ဘုရားမဲ့နေကြသည်ကို ၎င်း၊ အောက်မေ့ကြလော့” (ဧဖက် ၂း၁၂)။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်များကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲကြသည်ကို ဖော်ပြနေပါသည်။
“ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျှက်” (ဟေရှာယ ၅၃း၆)
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွှေကျမ်းပိုဒ်၌ လောကီလူသားတို့၏အပြစ်အားလုံး ဝန်ချဆုတောင်းခြင်းကို တွေ့ရသည်။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်က၊ အပြစ်သားတို့သည် မှားယွင်းသောဘာသာ တရားနောက်သို့ လိုက်၍လမ်းလွဲကြပြီဟု သွန်သင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်တုဆင်းတုများကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်၊ ခရစ်တော်အတု နောက်သို့လိုက်နေကြပြီဖြစ်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။ “ထိုသူတို့သည် ဥာဏ်အလင်း ကွယ်သည်ဖြစ်၍၊ စိတ်နှလုံးမိုက်မဲ့သောအားဖြင့် အလျှင်းမသိသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏အသက် နှင့်ကွာရှင်းလျှက် ရှိကြ၏” (ဧဖက် ၄း၁၈)။
၂။ ဒုတိယ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ချင်းစီ၌ အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခြင်း
“ငါတို့ရှိသမျှတို့သည် သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျှက်၊ ကိုယ်လမ်းသို့ အသီးသီးလိုက်သွားကြ သည်ဖြစ်၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၆)။
လောကီလူသားထုတခုလုံးအပြစ်ကြောင့် တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအား ဥာဏ်တုံးစေသည်။ နောက်သို့ဆုတ်စေသည်။ “ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကိုယ်လမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍” တဦး တစ်ယောက်မှ မိမိရွှေးချယ်မှုဖြင့် ဘုရားသခင်ထံသို့မရောက်နိုင်ကြတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် လူသည် “မိမိတို့လမ်းသို့” ကိုယ်စီလိုက်သွားကြသည်။ အပြစ်နှင့်ပြည့်သော နှလုံးသားသည်၊ ဘုရားသခင်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာသည်။ မိမိတို့ဘ၀အသက်တာကို မိမိတို့ထိန်းချုပ်လိုကြသည်။ မိမိတို့အစီ စဉ်အတိုင်း အသက်ရှင်လိုကြသည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ မိမိကိုယ်ကို မဆက်ကပ်လိုကြပါ။ ခရစ်တော်သခင်ထံ မိမိအသက်တာကို မဆက်ကပ်လိုကြပေ။
“ကိုယ်လမ်းအသီးသီး” ဟူ၍ လာသည်နှင့်အမျှ လူတိုင်း၌ မိမိကျူးလွန်သောအပြစ် ကိုယ်စီရှိကြ သည်ဟု ၎င်းကျမ်းပိုဒ်က ဖော်ပြထားပါသည်။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတိုင်း၌ အပြစ်ရှိကြသည်၊ ထူးခြားသောအပြစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုယ်စီရှိကြသည်။ အတူမွေးဖွားလာသော ကလေးနှစ်ယောက် လည်း ထို့အတူ မတူညီသောအကျင့်စရိုက်အပြစ်လက္ခဏာ ရှိကြ၏။ မိမိတို့၏ကျင့်ရိုးအတိုင်း အပြစ် လုပ်ကြသော်လည်း တချို့တွင်မူကား၊ အမှတ်မထင်သော လက္ခဏာဖြင့် အပြစ်လုပ်ကြသည်။ “ငါတို့ သည် ကိုယ်လမ်းအသီးသီးသို့ လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍” လူတစ်ဦးက လကျာဘက်သို့ မျက်နှာပြုပြီး၊ ကျန်တဦးမှာ လက်ဝဲဘက်တွင် မျက်နှာပြုနေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်ယောက်စလုံးဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်နေမည်ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်ဤလောက၌ အသက်ရှင်စဉ်တွင်လည်း၊ ဘုရားသခင်ကို အထူးသဖြင့် ဆန့်ကျင်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရားကို မေ့လျှော့ခဲ့ပြီး၊ မိမိအလိုသို့သာ လိုက်လျှောက်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဖာရိရှဲတို့သည် မိမိတို့ကို ချီးမွမ်းတတ်သူများဖြစ်သည်။ ရိုးဖြောင့်သူများဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြသည်၊ တပါးသူတို့ထက်သာသည် ဟုထင်တတ်ခဲ့ကြသည်။ ဇာဒုက္ကဲတို့လည်း ဝိညာဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ဆိုးများကို မယုံကြည်ခဲ့ကြပါ။ မိမိတို့အသွေးအသားထဲ အပြစ်ပါကြောင်း မသိကြပါ။ မိမိတို့ သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်ကို ဖါရိရှဲတို့သည် မသိကြပါ။ ထို့ကြောင့် “ကိုယ်လမ်းအသီးသီး” တို့နောက်သို့လိုက်ပြီး ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားကို မသိကြပါ။ ထို့ကြောင့် လူတိုင်းလူတိုင်းတို့ သည် အောက်ပါကျမ်းစကားအတိုင်း ပြောကြသည်၊
“ငါတို့ရှိသမျှသည် ကိုယ်လမ်းအသီးသီးတို့နောက်သို့ လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၆)။
မိတ်ဆွေလည်း ခရစ်ယာန်မိသားစုထဲက ပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်သင်၌ အပြစ်ရှိနေဆဲ၊ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ဆန့်ကျင်နေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် “ကိုယ့်လမ်း” ဖြစ်သည်။ အချို့တို့က မိမိတို့၏အပြစ်ကို စဉ်းစားနေကြကောင်း စဉ်းစားကြပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ မိမိအပြစ်ကို သိမြင်မည်ဆိုလျှင်၊ ထိုအခါ သင်သည် ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ကြုံနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့၏ အပြစ်များအတွက် ဝမ်းနည်းနေမယ့်အစား သင်၏အပြစ်ကို ခွင့်လွတ်နိုင်သောခရစ်တော်ကို ရှာဖွေပြီး ငြိမ်သက်ခြင်းရယူလိုက်ပါ။ အချို့က ထိုသို့ပြုနေနိုင်၏၊ အချို့က ခရစ်တော်ကိုငြင်းပယ်နေမည် ဖြစ်သည်။ “ငါတို့သည် ကိုယ်လမ်းအသီးသီးတို့နောက်သို့ လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍”
တချို့သောသူတို့က “ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးခိုင်မာဆဲပါ”။ အပြစ်ရဲ့အကျိူးအဆက်နှင့်ခရစ်တော်ကို လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုမလုပ်နိုင်ဘူး ဟုဆိုကောင်း ဆိုပါလိမ့်မည်။ ဘုရား သခင် ထာ၀ရဘုရားက အခုကစပြီး ငါ၏ချမ်းသာခြင်းထဲသို့ မဝင်ရကြဟု ကျိန်ဆိုနေမည်ကို စိုးရိမ်မိတယ်။” ကျန်နေသေးသော တရားဒေသနာတော်ကို ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးဖို့ မိတ်ဆွေတို့ ကို ပန်ကြားလိုပါတယ်။ တတိယ အချက်က မိတ်ဆွေအတွက် မျော်လင့်ရာကို ပေးစွမ်းပေးပါလိမ့် မည်!
၃။ တတိယ၊ ခရစ်တော်သည် မိမိ၏လူတို့အဖို့ ကိုယ်စားအသေခံပေးခဲ့ပါသည်။
ရွှေကျမ်းချက်တခုလုံးကို စိတ်ဝင်တစား မတ်တပ်ရပ်လျှက် အသံကျယ်ကျယ်ဖတ်ကြပါစို့၊ “ထာ၀ရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌ တင်တော်မူ၏”။
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။ ဒေါက်တာ အီဝပ်ဒ် ဂျေယန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ကျမ်းပိုဒ်၏ပထမထက်ဝပ်သည် အစေခံကျွန်၏ဝေဒနာကို ဖော်ပြထားပြီး၊ ဒုတိယစာပိုဒ် တွင် သခင်ကိုယ်တိုင် အပြစ်သားတို့၏နေရာ၌ အစားပင် အသေခံသည်ကို ဖော်ပြထားပါ သည်။ “တင်တော်မူ၏” ဟူသောစကားလုံးသည်၊ သူ့ကိုရက်စက်စွာ နှိပ်စက်ခြင်းကို ဆိုလို ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မျော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း အပြစ်၏နှိပ်စက်ခြင်း၊ ညှင်းဆဲခြင်း သခင် အပေါ် ကျရောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ငါတို့ထံသို့မရောက်ရတော့ပါ။ ငါတို့၏ငြိမ်သက် ခြင်းအဖို့ ကိုယ်တော်ဝေဒနာခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထာ၀ရဘုရားက ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဒဏ်ကို ကိုယ်တော်အပေါ် ကျရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထိုက်တန်သောအပြစ်အကျိူး ရလဒ်သေခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းအမျိုးမျိုး ကိုယ်တော်ခံရပြီးဖြစ်သည်။ သိုးထိန်းသည် မိမိသိုး တို့အဖို့ မိမိအသက်ကို စွန့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, pp. 349-350).
“ငါတို့ရှိသမျှတို့သည် သိုးကဲ့သိုးလမ်းလွဲလျှက်၊ ကိုယ်လမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွား ကြသည်ဖြစ်၍၊ ထာ၀ရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ် ၌ တင်တော်မူ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၆)။
ဒေသနာတော် ခေါင်းစဉ်အရ၊ “တဦးချင်းစီ၏အပြစ်ယေရှုအပေါ်တင်တော်မူပြီး ဖြစ်သည်”။ စပါဂျန် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ဤတွင် လောကအပြစ်၊ ပြစ်မှားသောအပြစ်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဝိဒ်မင်း၏အပြစ်သည် မနာရှေ၏အပြစ်နှင့်မတူ၊ မနာရှေ၏အပြစ်သည် ပေတရု၏အပြစ် နှင့်မတူ၊ ပေတရုအပြစ်သည်လည်း အမျိုးသမီးတယောက်၏အပြစ်နှင့်မတူ၊ ပေတရုနှင့်ထို အမျိုးသမီးလည်း ရုပ်သဏ္ဍာန်မတူပါ။ ထိုသူ၏အကျင့်လက္ခဏာကို မကြည့်ဘဲ၊ ထိုအမျိုး သမီးသည် လုဒိနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ သူတို့သည် အတူလမ်းလွဲကြသည်။ တူညီကြသည်၊ သို့သော် တဦးချင်းစီ၏အပြုအမူ၊ အကျင့်ဓလေ့ကား၊ မတူညီနိုင်ကြပါ၊ (“ထာ၀ရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်သို့တင်တော်မူ၏”) သင်သည် ဧဝံဂေလိတည်းဟူသော ကျမ်းမာရေးဌာနသို့ ရောက်ရှိလာပါက၊ သခင်ခရစ်တော် ၏အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောပြီး၊ ယခင်က "catholicon" ဟုခေါ်သော ခပ်သိမ်းသော အနာရောဂါကို ပျောက်စေတတ်သောဆေးကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်နှင့်အပြစ်ကို ဖြစ်စေတတ်သော အရာများကို သင်သည်ဖယ်ရှားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ (C.H. Spurgeon, “Individual Sin Laid On Jesus,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1977 reprint, volume XVI, pp. 213-214).
ခရစ်တော်ကို ကိုးစားပါ။ ခရစ်တော်ထံအပ်နှံလိုက်ပါ။ ကိုယ်တော်ကိုကိုးစားသော် သင်၌ရှက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ “ထာ၀ရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏”။
(၁၈၃၈-၁၈၇၆ခုနှစ်၊ ဖိလစ်ပီ. ပလစ်သီကုံးသော ဟာလေလုယာ!
ယေရှုသခင်ထံချဉ်းကပ်မည်လား?၊ မိမိအသက်တာ သခင်ထံအပ်နှံပါမည်လား? အသွေးတော်နှင့် ဆေးကြောပြီး၊ ခရစ်တော်၏ကိုယ်စား တရားစီရင်ခြင်းကို ခံခဲ့ပြီးသောခရစ်တော်ထံ သင်တိုးဝင်ပါ မည်လား? ထာ၀ရဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး၊ အသက်တာကို အပ်နှံကာ၊ ထာ၀ရအသက်ရယူနိုင်ဖို့ ယုံကြည်ခြင်းသင့်အား ပေးပါစေသော်!
အတူတကွ မတ်တပ်ရပ်ကြပါစို့၊ အကယ်၍ သင်၏အသက်တာဘ၀ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ဆွေး နွေးတိုင်ပင်လိုပါက ဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ လှမ်းလာကြပါ။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့် ဆေးကြော သန့်စင်ပြီး၊ မိမိအသက်တာကို လုံး၀အပ်နှံလျှက်၊ ထာ၀ရအသက်ရယူဖို့ သင့်အားဒေါက်တာ ကေကန်က ဦးဆောင်ပေးပါလိမ့်မည်! မစ္စတာ လီ ကျေးဇူးပြု၍ ဆွေးနွေးခန်းသို့ သွားကြမည့် သူတို့အဖို့ ဆုတောင်းပေးပါ။ အာမင်!
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာ ဂရိတ်တန် အလ်.ချန်မှ ဟေရှာယ ၅၂း၁၃-၅၃း၆ကို ဖတ်ကြား ပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၉၂၀ခုနှစ်၊ မစ္စစ်. အမ်နာ ဒါဘလူ. ဝါတာမန်း သီကုံးသော “ကျွန်ုပ်သိပါ၏” )ဟူသောဓမ္ဓသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
“ငါတို့ရှိသမျှတို့သည် သိုးကဲ့သို့ လမ်းလွဲလျှက်၊ ကိုယ့်လမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည် ဖြစ်၍၊ ထာ၀ရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့ပေါ်၌တင်တော်မူ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၆)။
(ဟေရှာယ ၅၃း၄၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂)
(ဟေရှာယ ၅၃း၆)၊ (ရောမ ၃း၉-၁၁)၊ (၁ပေ ၂း၂၅)၊ (ဧဖက် ၂း၁၂၊ ၄း၁၈)။
၂။ ဒုတိယ၊ ပုဂ္ဂုလ်တဦးတယောက်ချင်းစီ၌ အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခြင်း